INKONZO ye-OEM - Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
Oda Ishadi Eligelezayo
Sihlinzeka ngemikhiqizo enobuchwepheshe bokucubungula obuphelele, izinga lobuchwepheshe elithuthukisiwe, izindlela zokuhlola eziphelele, izinga eliphezulu kanye nekhwalithi ephezulu.
Ukuqanjwa kabusha kobuchwepheshe bomkhiqizo, ukusungulwa kwesevisi yekhwalithi ephezulu, ukuhlangabezana nezidingo ezahlukene zamakhasimende, nokuxazulula izinkinga zabasebenzisi kubuchwepheshe nangemuva kokuthengisa.
Uma ufuna i-transformer yangokwezifiso, sicela usithinte!
Ukuze unikeze ukudlala okugcwele ezinzuzweni zensiza zamabhizinisi wezinhlangothi zombili, ngokuhambisana nomgomo wokuzuzisana, ukunqoba-wina kanye nokuthuthukiswa okufanayo, izinhlangothi zombili zifinyelele imigomo elandelayo yokukhiqizwa kwe-OEM:
1. Ukushintshaniswa kwezinto zebhizinisi zezikweletu phakathi kwezinhlangothi zombili kufanele kube okuyiqiniso futhi kusebenze, ngaphandle kwalokho ukulahlekelwa okuvela ngenxa yalokho kuzothwalwa yiqembu eliphula umthetho.
2. Izindlela Zokubambisana
1. Iqembu A liphathisa Inhlangano B ukuthi ikhiqize ama-transformer neminye imikhiqizo enegama lenkampani, ikheli kanye nokuhlonza uhlobo lweNhlangano A. Inhlangano B iqinisekisa ukuthi imikhiqizo ekhiqizwayo ayiphuli noma imaphi amalungelo empahla yengqondo yomuntu wesithathu kanye namalungelo asemthethweni nezintshisakalo.
2. Iqembu B liqinisekisa ukuthi izinkomba zemikhiqizo enikeziwe zihambisana nezindinganiso zamanje zomkhiqizo wamakhasimende kanye nezidingo ezifanele zamazinga kazwelonke, nokuthi imikhiqizo enikeziwe ihambisana nezidingo ezifanele zokuvikelwa kwemvelo.
3. Imikhiqizo ye-OEM ithengiswa ngokuphelele yi-Party A. I-Party B ayinasibopho ngokuthengiswa.Iqembu B ngeke lithengise imikhiqizo ye-OEM enikezwe Inhlangano A kunoma iyiphi inkampani yangaphandle.
4. Ngemva kokuphelelwa yisikhathi noma ukunqanyulwa kokubambisana, Iqembu B ngeke liphinde likhiqize kabusha noma lidayise imikhiqizo enophawu lomkhiqizo weNhlangano A nganoma iyiphi indlela.
5. Iqembu A linelungelo lokuthumela izisebenzi ukuthi zigade izinto ezingavuthiwe, izesekeli, yonke inqubo yokukhiqiza, ikhwalithi yomkhiqizo, njll. yemikhiqizo ye-OEM.Iqembu B liyasebenzisana futhi lisize ngayo yonke imizamo.
3. Indawo, indlela kanye nezindleko zokulethwa (ukulethwa)
1. Kunqunywa amaqembu amabili ngokubonisana.
2. Izindleko zokupakishwa komkhiqizo nokwenza amapuleti kufanele kuxoxiswane ngazo phakathi kwezinhlangothi zombili.
4. Izimfuneko Zokupakishwa Komkhiqizo kanye Nezokuvikela
1. Iqembu A lizohlinzeka ngohlaka lwemiklamo yokupakishwa, amabhokisi ombala, imiyalelo, amalebula, amapulethi egama, izitifiketi zokuvumelana, amakhadi ewaranti, njll. Inhlangano B izobhekana nezindleko zokuthenga, ukukhiqiza kanye nokukhiqiza, futhi Inhlangano A izoqinisekisa futhi ivale amasampula.
2. Ngemva kokuphelelwa yisikhathi noma ukunqanyulwa kokubambisana phakathi kwezinhlangano ezimbili, Inhlangano B ngeke ibe nelungelo lokusebenzisa noma ukukhiqiza noma yimuphi umkhiqizo onophawu lweNhlangano A nganoma iyiphi indlela.
5. Ukuphathwa Komkhiqizo
1.Ubunikazi bophawu lokuhweba oluhlinzekwe yiQembu A (okuhlanganisa idizayini yokupakisha, imidwebo, izinhlamvu zesiShayina, isiNgisi nenhlanganisela yaso, njll.) okweNhlangano A. Iqembu B lizosebenzisa uphawu lokuhweba ngaphakathi kwesikophu esigunyazwe Inhlangano A futhi ngeke dlulisa noma wandise ububanzi bokusetshenziswa kwayo ngaphandle kokugunyazwa.
2. Ngemva kokuphelelwa yisikhathi noma ukunqanyulwa kokubambisana phakathi kwezinhlangothi zombili, Inhlangano B ngeke ibe nelungelo lokusebenzisa noma ukukhiqiza noma yimuphi umkhiqizo onophawu lweNhlangano A nganoma iyiphi indlela.
6. Isevisi yangemuva kokuthengisa
1. Isikhathi sangemva kokuthengisa kanye nesikhathi sewaranti kuzoxoxiswana ngaso phakathi kwezinhlangothi ezimbili.
2. Iqembu B ligcwalisa ngokuqinile izibopho ezifanele ezibalulwe Kumthetho Wekhwalithi Yomkhiqizo we-People's Republic of China.Iqembu B lizokwenza yonke imizamo yokuxazulula izinkinga zokubuyisela nokushintshisana kwezimpahla okubangelwa izinkinga zekhwalithi zeNhlangano B, futhi izindleko ezihlobene zizothwalwa Iqembu B;Iqembu A lizoba nesibopho ngezindleko ezihlobene ezitholwe ekulimaleni kwemikhiqizo okudalwe ukusetshenziswa okungavamile.